Wakhtiga Uu Mohamed Bin Salman La Wareegayo Kursiga Boqorka Oo La Ogaaday |
Wakhtiga Uu Mohamed Bin Salman La Wareegayo Kursiga Boqorka Oo La Ogaaday
sugaha Sacuudiga Mohamed bin Salman, oo dhowaan billaabay inuu xidho amiirada uu u arko inay halis ku yihiin, ayaa isku diyaarinaya inuu noqdo boqorka dalka, ka hor bisha November, markaasi oo magaalada Riyad lagu qabanayo shirka dalalka G20.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa wargeyska Middle East Eye u sheegay in Mohamed bin Salman aanu sugi doonin inta aabihii boqor Salman uu ka geeriyoodo, sababta oo ah waxa uu rumeysan yahay in joogitaanka aabihii ay siinayso sharciyad.
Sidaas darteed, Bin Salman ayaa ku qasbi doona aabihii, oo xusuusta sii luminaya balse sidiisa kale caafimaad qaba, inuu ka tanaasulo xukunka, kuna wareejiyo, sida ay sheegeen ilo-wareedyada.
Tani waxay soo geba-gebeyn doontaa shaqadii uu Mohamed bin Salaan billaabay 2017 markii uu ina adeerkiisa ka weyn Mohamed bin Nayef si awood ah ugala wareegay jagada dhaxal-sugaha.
“Waxa uu doonayaa inuu xaqiijiyo inta aabihii nool yahay inuu noqdo boqor,” ayuu yidhi mid ka mid ah ilo-wareedyada laga soo xigtay xogtan.
Ka hor inta aan la xidhin, Amiir Ahmed bin Abdulaziz, oo ah walaalka ka yar boqor Salman ayaa la siiyey fursaddii ugu dambeysay oo ahayd inuu kusoo biiro mashruuca Mohamed bin Salman, hase yeeshee waa uu diiday, kadibna la xidhay.
“Ahmed waxaa la saaray cadaadis xooggan oo ah inuu taageero Bin Salman. Waxa uu la kulmay boqorka waxaana loo sheegay inuu taageero wiilkiisa,” ayuu yidhi ilo-wareedka.
Ahmed waxa uu boqor Salman u sheegay in isaga shakhsiyan aanu dooneyn inuu boqor noqdo, balse aanu taageereyn Mohamed bin Salman.